ပြည်သူ့: 50 တစ်ရာမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ရဲ့သမီးပဲရစ်၏မှတ်ဉာဏ်သို့သိမ်းသွားခြင်းရရှိညစ်ညူး! - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "လူတွေက: 50 တစ်ရာပဲရစ်သို့သိမ်းသွားခြင်းကိုရရှိမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ရဲ့သမီးများ၏မှတ်ဉာဏ်ညစ်ညူး!
ပြည်သူ့: 50 တစ်ရာမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ရဲ့သမီးပဲရစ်၏မှတ်ဉာဏ်သို့သိမ်းသွားခြင်းရရှိညစ်ညူး!
Wanda ပြည်သူ့အမေရိကန်ရက်ပ်၏သမိုင်းအတွက်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်နောက်တဖန်လှုပ်ခတ်ခဲ့သည်။ အမှန်မှာထိုသေံတစ်ရာရက်အနည်းငယ်အကြာပဲရစ်, မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်နဲ့ရက်ပ် 50 ၏သမီးအကြားတပ်ဆင်ထားသည်။ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုခုနှစ်, Pop ဂီတ၏ရှင်ဘုရင်အကြောင်းကိုအဆုံးစွန်၏ထငျမှတ်ချက်တွေ။
လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်အမျိုးမျိုးတစ်ဦးကပုံမှန်တိုက်ပွဲများ, အမေရိကန်ရက်ပ် 50 ရာခိုင်နှုန်းကို မကြာသေးမီကမိမိသားကိုအသေခံလိုသူအကြိမ်ကြိမ်သူမ၏သူငယ်ချင်းအဆိုတော်ခရစ်ဘရောင်းကမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်နှိုင်းယှဉ်ပျော်စရာခဲ့ဖူး။
တစ်ပါတ်ယခုရှိပါသည်သူသည်အဆွေခင်ပွန်း၏အယ်လ်ဘမ်ရောင်းအားကိန်းဂဏန်းများပေါ်မှာဤလမ်း commented: "ခရစ်ဘရောင်းကငါ့ကိုသည်ကအကောင်းဆုံး 69,5e All-အချိန်စံချိန်ရောင်းချသူ ( ... ) အောင်, United States မှာ7သန်းမှတ်တမ်းများကိုရောင်းခရစ်ဘရောင်းကမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်စံချိန်".
ဒါပေမယ့်ဖို့ကုလားအုပ်ချိုးဖဲ့သောကောက်ရိုး ပဲရစ်ဂျက်ဆင် သောကြာနေ့, စက်တင်ဘာလ6နေ့စွဲ။ နေစဉ်လေထန်ကျွမ်းပစ်ကြောင်း ခရစ်ဘရောင်းက တစ်ဦးဖျော်ဖြေပွဲမှာစင်ပေါ်မှာခဲ့ 50 ရာခိုင်နှုန်း အဖြစ်တစ်ဖန်ပြန်လည် Pop ဂီတရဲ့ဒဏ္ဍာရီဆန့်ကျင်နေတဲ့လှံကိုဖွင့်ဖို့အခွင့်အလမ်းတစ်ဆယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
"ငါသည်ဟုတာအားလုံးကမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကြောင်းပြုကြပြီနိုင်မယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ သူက "နောက်ကွယ်မှငယ်ယောက်ျားတွေစောင့်ကြည့်ဖို့လည်းအလုပ်ရှုပ်နေခဲ့။ ရည်ညွှန်း အသေးစားအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေး၏စွဲချက် အဘယ်သူ၏ကြယ်ပွင့်တချို့အချိန်များအတွက်သားကောင်ဖြစ်ပါတယ်။
"စစျမှနျတဲ့ဒဏ္ဍာရီအများပြည်သူအာရုံစိုက်မှုဆွဲဆောင်ဖို့ဤမျှလောက်စွမ်းအင်သုံးစွဲဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ လူတစ်ဦး, ငါ့မိတ်ဆွေတစ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး။ ဒါဟာ "သင်အစဉ်အဆက်လိမ့်မည်ထက်ပိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးခဲ့သည် သူမသည် commented ။
သူကဆက်ပြောသည်: "အကြင်သူသည်သင်တို့ကဲ့သို့သောလူပြုပါဝေဖန်အချိန်သုံးစွဲနေတဲ့ရှုပ်ထွေးပေမယ့်အချည်းနှီးဖြစ်၏။ သို့သော်သင်တို့သည်နောက်တဖန် "ဆိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများပုံမှန်ဖွင့်။ Punchline !!
အရာဖို့ရက်ပ် replied: "ဟေ့, အဘယ်ကြောင့်ငါ့ကိုလူဆိုးပေးပါ။ ငါသည်သင်တို့ကို, ပဲရစ်ခံစားရပုံကိုနားလည်ပါသည်။ သို့သော်အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကသူ့ကိုစဉ်းစားဘာယောက်ျားလေးများကိုမေးမဟုတ်လော ".
တွေ့တဲ့ကောင်းပြီ, 50 တစ်ရာကျိန်းသေဆန့်ကျင်ဘက်ပြုရာကာလ, Wanda ပြည်သူ့မရှိန့်သတ်ချက်ရှိပါတယ်! သငျသညျသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးဘယျအရာထင်သလဲ
ထိတ်လန့်အတွက် Zara Tindall: မင်းသမီးအန်း "ဘီဘီစီအားကစားကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၌သူ၏သတို့သမီး၏အောင်ပွဲများအတွက်မဲပေးမလုပ်ခဲ့"